लोकसेवामा आउन सक्ने ७ जटील प्रश्न, कसरी हल गर्ने ? सहसचिव प्रकाश दाहालको सुझाव « Nijamati Khabar
लोकसेवामा आउन सक्ने ७ जटील प्रश्न, कसरी हल गर्ने ? सहसचिव प्रकाश दाहालको सुझाव
विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने आ-आफ्नै शैली हुन सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार संविधानको धारा उल्लेख गरेर बुँदागत रुपमा लेख्दा वा तुलनात्मक रुपमा टेवलमा लेख्दा दुबै सही नै हुन्छ । मुख्य कुरा जुन शैलीमा लेखे पनि संविधानका व्यवस्थामा आधारित भएर नै लेख्नुपर्छ । टेवलमा लेख्ने हो भने पृष्ठभूमिमा संविधानका भाग र धारा उदृत गरी विषयवस्तुलाई भने टेवल भित्र राख्न सकिन्छ । वा तेस्रो विकल्प पृष्ठभूमिमै भाग र धारा उदृत गरी व्यवस्थाहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्याई बुँदागत रुपमा मात्र लेख्न पनि सकिन्छ ।
६. शिर्षक राख्दा English बाट लेख्दा केही फरक पर्छ ? त्यसैगरी उत्तरको विचमा English शब्द लेख्दा कुनै फरक पर्छ ?